सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एम्स्टर्डम मा के गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एम्स्टर्डम मा के गर्न
तपाईं पहिलो पटक एम्स्टर्डम भ्रमण वा फेरि अझै भव्य नहरहरुमा अन्वेषण गर्न फिर्ता होस्, तपाईं बारेमा जान्न चाहन्छु हुनेछ एम्स्टर्डम मा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू! यदी तिमी एम्स्टर्डम मा Damrak बाटो परे रोमांचक खोज्न तयार, यो सूची आफ्नो Getaway साँच्चै जादुई गर्नेछ!
सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एम्स्टर्डम मा के गर्न: उच्च टी आनन्द सानो घर एम्स्टर्डम मा मा
के दिउँसो चिया भइरहेको भन्दा cuter र थप अद्वितीय हुन सक्छ Amsterdams सानो घर? हो, यो निश्चित भएको फिट एम्स्टर्डम मा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू बिल! एम्स्टर्डम पुरानो छिमेक मध्ये यो सानो घर मात्र हो2विस्तृत मीटर. मालिक साँच्चै पुरानो सम्पत्ति मा नयाँ जीवनमा प्रेरणाबाट: घर एक पटक पाँच को एक परिवार समायोजित! थियो रूपमा अकल्पनीय, मात्र यो सुन्दर tearoom तपाईं पर्खिरहेका कि कथाहरू मध्ये एक छ.
पहिलो तल्ला आरामदायक सानो चिया पसल छ, जबकि दोस्रो र तेस्रो फर्श तयार एक चिया infused कहानी तपाईं स्वागत छन्. त्यहाँ नास्ता लागि धेरै विकल्प हो, ब्रन्च, उच्च चिया, र पनि भोजन. म दुई पटक सानो घर मा गरिएको छ: एक पटक जो एक रमणीय नास्ता लागि म लेट एक घण्टा भएको थियो (कि मेरो उत्कृष्ट दिन थियो), र अर्को धेरै हालै औंला स्यान्डविच भएको दिउँसो चिया, तीन अलग अलग Pies, र scones हाम्रो शिष्ट पाहुना हाम्रो साथ टाढा केहि लिन प्रस्ताव गर्दा कि त स्वादिष्ट, हामी आनाकानी गरेनन्. हामी छनौट दिउँसो चिया मा मूल्य थियो 25 EUR प्रति व्यक्ति, जबकि उच्च टी छ 35 युरो.
सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एम्स्टर्डम मा के गर्न: आँखा Filmmuseum अन्वेषण
एम्स्टर्डम सबै slick आधुनिक भवनहरु को, यो छ आँखा Filmmuseum कि बाहिर खडा. यसको चिकना संग, उज्ज्वल सेतो लाइनहरु नदी IJ साथ विपरीत भएको stretching रेल स्टेशन. आँखा एम्स्टर्डम सूचीमा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू माथि पक्कै छ. यसको मुख्य चासो हो सिनेमा, धेरै स्क्रीन पंथ र क्लासिक चलचित्रहरू एक विस्तृत दायरा भेटी संग. छन्, तथापि, पनि अस्थायी अद्वितीय कला प्रदर्शनीहरू र बच्चाहरु को लागि गतिविधिहरु, प्लस असाध्यै राम्रो दृश्य फिर्ता शहर को केन्द्र तिर. यहाँ पनि टाढा लुकेको, र स्थायी प्रदर्शनमा, एक चलचित्र rarity जीन Desmet को पुराना चलचित्रहरू छ, जो जहाँसम्म फिर्ता तिथि 1907. यहाँ खाजा लिन, धेरै: यस क्याफे बार पहिलो दर छ.
बैग अनि पर्स को डिस्कवर संग्रहालय
दुवै प्राचीन र आधुनिक हैंडबैग तीन तलाहरू, पर्स र पर्स को Tassenmuseum Hendrikje एम्स्टर्डम सबैभन्दा रूपमा बनाउन असामान्य र अपिल आकर्षण. Immaculately पुरानो र सुन्दर हवेली मा प्रस्तुत, विशेषताहरू कला नोव्यू र कला डेको टुक्रा समावेश, दुर्लभ र झन्झन् रंग 1950 हैंडबैग को एक पुरा मन्त्री कडा प्लास्टिक को Perspex एक आदिम फारम गरे र (नैतिकता शंकास्पद) जनावर बनाइएका पुराना हैंडबैग. समकालीन बैग र पर्स को अस्थायी प्रदर्शनियों संग्रह बाहिर गोलो.
को Poezenboot (बिरालो नाउ)
एम्स्टर्डम मा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एक समावेश गर्दछ भने मलाई एक प्यारो पशु pet गर्न प्राप्त, त्यसपछि मलाई गणना मा! मा जानुहोस् र धेरै लोकप्रिय catboat भ्रमण! हां, तपाईं सही पढ्न! हुनत बिरालोहरु सामान्यतया सबै लागत मा पानी जोगिन, को felines वा Poezenboot, आफ्नो अस्थायी बासस्थान मा घर मा पूर्ण देखिन्छ. यो एक पशु मन्दिरमा एक नहर मा अस्थायी छ एम्स्टर्डम. यसलाई मा Henriette वैन Weelde द्वारा स्थापित भएको थियो 1966 आवारा लागि एक घर रूपमा, बिरामी, र त्यागेर felines, र पछि एउटा सरकारी दान मा हुर्केका छ.
को houseboat सम्म accommodates 50 एकैचोटि बिरालोहरु, 14 जो को स्थायी बासिन्दा हुन्. मानव आगंतुकों साथै पोत मा स्वागत छ. धेरै ग्रहण लागि बिरालो चयन गर्न आउन, but tourists are also welcome to drop in and scratchakitty behind the ears.
यो एक दान छ रूपमा, डुङ्गा मन्दिरमा आगंतुकों बायाँ दानको धन्यवाद afloat रहन्छ. उठाएको सबै पैसा धेरै एम्स्टर्डम बिरालोहरु सकेसम्म मदत तिर जान्छ. बिरालो नाउ फाउंडेशन जसको मालिक पशु हेरविचार उठयो सक्दैन बिरालोहरु को neutering लागि दिन्छिन्, साथै हराएका. स्वयंसेवकहरु बिरालोहरु को हेरविचार, जसलाई केही आगंतुकों द्वारा अपनाए छन्. विश्वास गर्दै बिरालोहरु आफ्नो नयाँ घरमा पूर्ण तरिकाले भूमि जीवन फेरि अनकुल बनाउनु.
प्लास्टिक मत्स्य पालन जाने Amsterdams नहरों एक अद्वितीय यात्रा समयमा
जा को एम्स्टर्डम नहरहरुमा मा प्लास्टिक माछा मार्ने निश्चित लागि एम्स्टर्डम मा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एउटै हो! र मलाई तपाईं बताउन गरौं, यसलाई सुनिन्छ जस्तै यो ठीक छ. प्लास्टिक ह्वेल द्वारा एक पर्यटक गतिविधि संग जोडीएको एक वातावरण मैत्री पहल, को2घण्टा डुङ्गा यात्रा साँच्चै रमाइलो र सुरम्य स्थानहरू दुवै मा पठाएमा. तपाईंले डुङ्गामा कदम, तपाईं आफ्नो माछा मार्ने नेट प्राप्त, र बन्द तपाईं जाने!
सबै भन्दा राम्रो भाग गर्दा अन्य नाउ एक predetermined मार्ग अनुसार पछिल्लो सेल कि शायद, तपाईं पनि तपाईंलाई प्लास्टिक को एक टुक्रा ठाँउ जान प्राप्त. It turns intoacompetitive I Spy game where everyone is super invested in finding even the smallest bits of plastic bags. कसैले नहर छेउमा नजिकै एक बोतल स्थलहरू गर्दा एउटा वास्तविक उत्सव हुन्छ. कप्तान पोत Maneuvers रूपमा moored डुङ्गा बीचमा फिट गर्न, तपाईं कोण आफ्नो हतियार र triumphantly को troublemaker बाहिर माछा! अन्य यात्रु संग दिन को weirdest क्याच साथै, हाँस र बन्धन छलफल गर्न तयार.
म यो अनुभव निश्चित आफ्नो गर्दा लायक छ कि लाग्छ, र एम्स्टर्डम नहरहरुमा अनुभव गर्न एक असामान्य तरिका प्रदान गर्दछ. तपाईं थकित रही बिना प्रशस्त उत्प्रेरित गर्नेछ, र एक पटक भ्रमण माथि छ, तपाईं साथै उपलब्धि को एक अर्थमा संग डुङ्गा बाहिर कदम हुनेछ. बस लागि सबै 25 युरो.
के तपाईं कहिल्यै छक्क परे भने के Amsterdams Houseboats एक बस्न जस्तै छ, यो पत्ता लगाउन आफ्नो मौका छ. एम्स्टर्डम मा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू हाम्रो सूचीमा, तपाईं बस गर्न सक्नुहुन्छ! मालिकको अनुकूल छन् र तिनीहरूको क्लासिक houseboat अप खुलेको, जसमा शुरू भएको थियो 1914 1960 मा परिवर्तित भइरहेको अघि बालुवा र रोडा लागि माल ढुवानी गर्ने जहाज रूपमा. आगंतुकहरुलाई आरामदायक रहन क्षेत्र मार्फत आफ्नो बाटो नज गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ व्याख्यात्मक सजीले को एक मुट्ठी houseboat जीवन मा तल कम दिन. मालिकको एक्लै छैनन्; लगभग 3,000 barges र Houseboats Amsterdams ग्याँस र बिजुली नेटवर्क प्लग छन्. जिज्ञासा सन्तुष्ट, you can stroll along the street to an excellent dining establishment, रेस्टुरेन्ट शुतुरमुर्ग.
सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एम्स्टर्डम मा के गर्न: एउटा अडियो टूर माध्यम Tuschinski थियेटर लिन
पछि आश्चर्यजनक Tuschinski थियेटर इतिहास पत्ता लगाउन. अब एक कार्य सिनेमा, Reguliersbreestraat मा थिएटर को Pathe समूह को भाग हो. अद्वितीय मोहरा कला डेको र कला नोव्यू को एक मिश्रण छ. को architect Hijman लुइस डे जोंग द्वारा Tuschinskis आयोग सिर्जना. तर रूपमा राम्रो भएको मोहरा छ रूपमा, यस सिनेमा सबैभन्दा ठूलो हल एक वास्तविक थिएटर छ र एक रातो मखमल कुर्सी मा एक मनपर्ने चलचित्र हेर्दै रूपमा केही एकदम आकर्षक रूपमा छ.
को थिएटर दैनिक प्रदान गर्दछ अडियो पर्यटन बीच भनेर सुरु 09:30 र 11:30. भ्रमण अंग्रेजी र डच दुवै उपलब्ध छ. यो टिक्छ 45 मिनेट र लागत 10 EUR चिया वा कफी एक कप समावेश जो. एक निर्देशित यात्रा को लागी पनि उपलब्ध छ ठूलो समूहबाट सुरू 15 मान्छे. बुक गर्न, rondleidingen.tuschinski@pathe.nl ईमेल पठाउनुहोस्.
तपाईं थिएटर माहोल रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं योजना चलचित्र स्क्रीनिंग मा एक नजर लाग्न सक्छ. त्यहाँ तपाईं Pathe वेबसाइटमा अन्य प्रदर्शन पाउनुहुनेछ. को एक देखाउँदै रमाइलो गर्न सुन्दर थिएटर ठाउँ, चलचित्र महान् हल मा खोज्न. कहिले काँही, साथै प्रत्यक्ष संगीत त्यहाँ हुन सक्छ.
सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एम्स्टर्डम मा के गर्न: एउटा भाग कोठा साहसिक Rijksmuseum मा जानुहोस्
को गर्मी मा को 2018 Rijksmuseum एक गर्मिहरु विशेष सीमित गर्न चाहनुभएको थियो के शुरू. यसलाई अब एक अद्वितीय छ भाग्ने खेल experमence र एम्स्टर्डम मा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू र हाम्रो सूची मा Amsterdams सबै भन्दा प्रसिद्ध संग्रहालय मा ठाँउ लिन्छ. तथापि, यो देखिन्छ कि प्रारम्भिक सफलता पछि, क्वेस्ट यहाँ रहन छ. अनुभव एक उदार रहन्छ 1.5 घन्टा र साँच्चै माहौल मा तपाईं खींचती. तपाईं इटालियन जादूगर र alchemist Alessandro Cagliostro द्वारा एक 18 औं सताब्दी पुस्तकबाट चोरी एक सूत्र पुन संग tasked छन्.
दुनिया मात्र संग्रहालय को प्रतिदीप्ति को चमत्कार समर्पित
एम्स्टर्डम प्रसिद्ध एनी फ्रैंक हाउस जो एक ठूलो कारण किन यो एम्स्टर्डम मा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एउटै हो कहीं अधिक साइकेडेलिक कुराहरूलाई समर्पित यो सानो संग्रहालय धेरै नजिक छ!
स्वामित्व र द्वारा घोडी फेद कलाकार निक Padalino संचालित. बिजुली Ladyland एम्स्टर्डम सूचीमा गर्न सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू माथि निश्चित छ. यो पनि त्यस्तै नाम सडक स्तर कला तल पाउन सकिन्छ, बिजुली लेडी. बिजुली Ladyland संसारको पहिलो गरेको छ (र जस्तो देखिने मात्र) museum focusing solely on the magic of fluorescent light.
कम यात्रा एक यात्रा मा जान तयार, तर ओह यति धेरै रोचक? एक सवारी पकड एक ट्रेन सेव! कुनै लुकेका शुल्क, बस सजिलो!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “सबैभन्दा अद्वितीय कुराहरू एम्स्टर्डम मा के गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-unique-things-amsterdam/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#amsterdamtrip #UniqueAmsterdam ट्राभेलमस्टरडम travelnetherlands